नेपाललाई १० लाख डोज खोप अनुदानमा दिने चिनियाँ घोषणा, हार्दिक नमन । – Yuwa Aawaj
नेपाललाई १० लाख डोज खोप अनुदानमा दिने चिनियाँ घोषणा, हार्दिक नमन ।
जेठ १४, २०७८ शुक्रबार 361
काठमाण्डौ : चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाललाई १० लाख डो’ज खोप निदे घो’षणा गरेका छन्। बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको कुराकानीमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छीले राष्ट्रपति भण्डारीसँगको कुराकानीका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले १० लाख डोज खोप दिने घो’षणा गरेका हुन्। नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले ट्विट गर्दै सो जानकारी गराएकी हुन्।
‘आज नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भएको टेलिफोन वार्ताको क्रमका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनिफिङले चीनले नेपाललाई कोभि’ड १९ को १० लाख डोज खो’प अनु’दानमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन्’, राजदूत होउले लेखेकी छिन्।
राष्ट्रपति भण्डारीका सञ्चार विज्ञ टीका ढकालका अनुसार भण्डारी र चिनफिङबीच झन्डै पौने घन्टा कुरा भएको थियो। कुराकानीका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारी नेपाल सबै नेपालीलाई पुग्ने खोप चीनबाट किन्न इच्छुक रहेको उल्लेख गर्दै
त्यसका लागि पहल गरिदिन अनुरोध गरेकी थिइन्। जवाफमा राष्ट्रपति चिनफिङले नेपालजस्तो मित्र राष्ट्रलाई सहयोग गर्न आफूले पहल गर्ने बताएका थिए। दुई देशका राष्ट्रपतिबीच कुराकानी गराउन दुबै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयले केही
दिनदेखि तयारी थालेका थिए। राष्ट्राध्यक्षको तहमा कुराकानी हुँदा सरकार र कूट’नीतिक नियोगलाई पनि काम गर्न सजिलो हुने भएकाले राष्ट्रपति भण्डारीले दुबै देशका समकक्षीलाई खोपका लागि अनुरोध गरेको सञ्चार विज्ञ ढकालले बताए।
Prevदमक को-भिड अस्पतालको लागि साहाशी चेली सदिक्षा बास्तोलाबाट २० हजार सहयोग, हार्दिक नमन ।
Nextबिरामीले अस्पताल र औषधी नपाएर कोही म’र्छ भने त्यो मृ’त्यु होइन, ह’त्या हो ।
अरुको ज्यान बचाउद बचाउदै आफ्नै ज्या’न बचेन !
साउथ इन्डियन अभिनेता महेशबाबुले बचाए एक बालिकाको जीवन !
१० गोलको वर्षा गर्दै विश्वकप छनौटको तेस्रो चरणमा प्रवेश ।